Gịnị bụ Ezi SEO? Nke a bụ ihe ọmụmụ | Martech Zone
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, m kemgbe ezi olu banyere otú ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ ọchụchọ na-ajụ ịgbanwe. Ọ bụ ihe nwute ka ha na-ahapụ ịhapụ ndị ahịa ha etinyego ego buru ibu mana n'ezie ebibi ikike ha inweta ikike ndu, ogo, na okporo ụzọ.
Ezi SEO: Ihe Omume
Ihe ndị a bụ eserese nke otu isiokwu ndị ahịa anyị na-adịbeghị anya maka ọkwa oge iji oge Semrush:
A - Nke a bụ mbido weebụsaịtị nke ndị ahịa n'okpuru ụlọ ọrụ gara aga. Ọ bụ ngalaba ọhụụ ọhụụ na-enweghị ikike.
B - Mgbe oge na-enweghị uto, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịkwụsị usoro ihe mgbe ochie nke ịmepụta ọtụtụ ngalaba, na-akpaghị aka na ọnụọgụ nke ọtụtụ peeji nke ederede bara ụba, yana backlinking ike.
C - Saịtị ahụ bilitere n'ụzọ dị egwu n'ọkwá na okporo ụzọ nke ahịhịa; Otú ọ dị, ọ dịghị anya Google algorithms iji mebie atụmatụ backlinking na dobe saịtị ahụ na ikike ya na mbụ.
D - A chụrụ ụlọ ọrụ anyị n'ọrụ ma were anyị were were saịtị ahụ yana ogo ọchụchọ. N'ime ọnwa isii sochirinụ, anyị wughachiri saịtị ahụ, weghachite backlinks na-egbu egbu, bugharịa ngalaba niile na otu ngalaba, weghachite ọtụtụ peeji nke isiokwu gaa na etiti, ibe isiokwu, mepụta ọdịnaya bara ụba, na infographic. Anyị na-achụ efu backlinking na-enweghị akwụ ụgwọ nkwalite ihe obula. Onweghị. Nada.
E - Nsonaazụ ahụ na-aga n'ihu ịme ka ịkekọrịta, itinye aka na mgbanwe. N'ime elu nke usoro gburugburu n'etiti afọ gara aga na afọ a, nnọkọ dị elu 210%, ndị ọrụ na-arị elu 291%, nyocha peeji nke dị elu 165%, ọnụego bounce agbadawo 16%, ọhụụ ọhụrụ dị elu 32%, ndị ọbịa na-alọghachi gbagoro 322% . Onye ahịa a na-eji ekwentị akpọ maka azụmahịa, yabụ anyị enweghị data ntụgharị kpọmkwem na mpụga nyocha nyocha ebe a jụrụ ha otu esi chọta ha. Google na-aga n'ihu na-eduzi ụzọ.
Anọgidere m na-adọ ndị ụlọ ọrụ na-adọ ndị ọrụ na-ewe ndị ọrụ nyocha bọọlụ aka na-anaghị enyocha ndị na-ege ntị, asọmpi, ma ọ bụ omume ha na saịtị ahụ. Backlinking n’etinyeghi ihe dijitalụ dijitalụ dijitalụ dị mkpa, bara uru ma bara nnukwu uru ga - ewetara gị nsogbu. Anyị na-aga n'ihu ịchụpụ nsonaazụ ndị ahịa anyị site na nwetara ikike kama ikike nke ahụ gbanwere ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ya.
Ihe omumu miri emi na ọgụgụ isi na-aga n'ihu na Google's Rankbrain algorithm. Larry Kim kwuru:
Google ga-aga n'ihu na-enyocha ibe gị maka ajụjụ dị mkpa… maka nwa oge. Mana ọ bụrụ na ọ ghara ịdọnye njikọ, ọ ga-anọgide na-anwụ ọnwụ nwayọ. Ọ nwere ike idafu pasent 3 nke okporo ụzọ kwa ọnwa - pere mpe ị hụghị ya ruo oge. N'ikpeazụ, ibe gị ga-ada site na esemokwu ogo.
Ruo mgbe oge gafere.
Atụmatụ nyocha usoro nke oge a anaghị achọ ndị ọkachamara nyocha ụnyaahụ. Usoro nyocha nke okike nke oge a choro nnukwu ahia na ndi ahia ahia nke ghotara otu esi achoputa ma mekwaa ike dijital gi na ndi na ege gi ma nye ha uzo kachasi nma igbanwe.
Y’oburu na onye ndumodu gi n’adighi achoputa ihe, n’enye ihe omuma gi, ya na ichoputa saiti gi, oge erugo icho onye ozo n’acho. N'ezie, ọ ga-amasị anyị inye aka - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye nkwusa. Ahụmịhe anyị nwere ebe ahụ enweghị atụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Tags: ọjọọ seoezigbo seoisiokwu ogonyocha ọchụchọnyocha nke ohurunyocha ederede nyochausoro nyocha nke okikendị na-eme nchọpụta iheogosemrushihe dị mma seo